EN မြန်မာ ဆက်သွယ်ရန်
အလုပ်ရှင် အလုပ်ရှင် ပင်မစာမျက်နှာ အလုပ်ရှာမယ် Yangon မှာရှိသောအလုပ်များ အရောင်း လက်လီရောင်းချမှုလုပ်ငန်း Yangonမှလက်လီရောင်းချမှုလုပ်ငန်းနှင့်ပက်သက်သောအရောင်း အလုပ်အကိုင်ကိုကြည့်မယ်
အသစ်ပြန်ပြင်သည်။: 11 January 2017
CHANGI-Light Myanmar Co.,Ltd
နောက်ဆုံးလျှောက်ထားရန်ရက်: 31 January 2017
အလုပ်လျှောက်မယ် ဒီအလုပ်ကို မိတ်ဆွေများကို ညွန်းမည်။
ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုကြည့်မယ် reference: JBLI8879151
Excellent in English Skills လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်များ
• Responsible for development and delivery of product demonstrations • Responsible for representing the product to client, consultants & architects and at field events such as conferences • Able to respond to functional and technical elements • Able to convey customer requirements to Product Management teams • Able to travel throughout sales territory. လိုအပ်သောအရည်အချင်းများ
Minimum job requirements . Male (3posts)
• B.E,B.TECH, AGTI (EP/EC)
• At least2years relevant experience in vendor sales
• Must be able to use Auto CAD and Microsoft Office
• Must be conversational level in English
• Initiative and hard working
*Attractive remuneration for those selected
Our Company : CHANGI-Light Myanmar Co., Ltd
Year of Established : Established Singapore in 1993 and Established Myanmar in 2013 by Myanmar and Singapore nationals who have grate experience in Supplying lighting fixtures for Residential, Industrial &Commercial
Projects in Singapore and Myanmar.
Business Type : Supplied quality lighting fixtures and accessories included lamps Ballast, LED, transformer, driver and pole etc…
အလုပ်လျှောက်မယ် ဆင်တူသော အလုပ်များ
အလုပ်လျှောက်မယ် Work.com.mm ကအလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို.အလုပ်ရှင်များဘက်ကငွေတောင်းခံမှု၊ စရိတ်စကပေးရမှု နဲ.အခြားငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာများကောက်ခံမှုရှိခဲ့ပါက " Report abuse " ကိုနှိပ်ပြီး တိုင်ကြားလို.ရပါတယ်။
ဒီအလုပ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်သောအလုပ်အဖြစ်သိမ်းထားမလား? အတည်ပြုရင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေရာမှာ ဒီအလုပ်ကိုသိမ်းပေးထားပါမယ် ပယ်ဖြတ်သည်
သင်ကကျွန်တော်တို.အလုပ်ရှာဖွေသူစည်းကမ်းများသို.အလုပ်ရှင်များရဲ.စည်းကမ်းများနဲ.ပတ်သက်ပြီးသတိပေးစာပို.ပါမယ်။ သင့်ရဲ.သတိပေးတိုင်ကြားစာပို.ရခြင်းရဲ.အကြောင်းပြချက်ကဘာပါလဲ ? အကြောင်းပြချက်ရွေးချယ်ပါ။
© 2012 - 2017 Work.com.mm.ကျွန်တော်တို့ ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှအချက်အလက်များကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ မည်သည့်နေရာတွင်မှ ဖော်ပြခွင့်မပြုပါ